Noocyada Caanaha ah | January 2020
Ugu Weyn Ee Noocyada Caanaha ah
Noocyada ugu fiican ee abrikot
Khamrigu waa miro iyo dhir beeraleed, taas oo ah mid aad ugu badan aaggeenna. Meelaha beeralayda, waxay ku taal meel aad u muhiim ah. Geedka ubaxyada iyo urta ma aha mid dhab ah in la ogaado xilliga guga ee sanadka. Noocyada dhaqankan waa mid aad u ballaaran. Si aad u koraan khudaar beertaada ka mid ah beertaada, waxaa jiri lahaa rabitaan.
Goobidda iyo dayactirka noocyo khudaar ah oo khudaar cufan ah "March March"
Lahaanshaha geedka khudaarta leh ee beerta waa farxad dhab ah. Sonkorta Colonovidny "Prince March" oo ku koray Ukraine dhawaan iyo aan weli helin qayb ballaadhan. Soo dhawow sifooyinka khudaarta "Prince March", iyo waliba dhammaan waxyaalihii abuuray iyo daryeeli lahaa geed.
Digaag ama khudaar Tafaasiisha khudaarta kala duwan
Inta badan beeralayda dalkeena waxay maqleen fersken iyo abrikot, kuwaas oo ka weyn size, ur sida cananaaska iyo leeyihiin dhadhan aan kala dhantaalan iyo macaan oo kala duwan. In this article waxaan ka hadli doonaa noocan oo kale ah khudaar, kaas oo sidoo kale loo yaqaanno hybrid peach. Qeexida geedka geedku wuxuu la mid yahay muuqaalka kalluunka khudaarta, taas oo loola jeedaa kala duwanaansho dhexdhexaad ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyada Caanaha ah 2020